देशका विभिन्न स्थानमा बाढी-पहिरोको उच्च जोखिम, राहत बाँड्न ३ अर्ब रुपैयाँ तयार !
काठमाडौं, १७ असार–मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज (आइवार) दिनभर देशका केही ठाउँमा १०७ मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ । न्यून चापीय रेखा नेपालनजिकै आइपुगेकाले केही दिन भारी वर्षा हुने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ ।
महाशाखाका अनुसार आइतवार बिहानैदेखि देशका प्रदेश नम्बर १, २ र ४ का अधिकांश जिल्लामा भारी वर्षा शुरु भएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ३ का सिन्धुली, धादिङ सहितका जिल्लामा पनि आइतवार बिहानैदेखि वर्षा शुरु भएको मौसमविद् समीर श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए ।
मौषमविद् श्रेष्ठका अनुसार आइतवार राति देशका प्रायः सबै ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ । आज साँझदेखि प्रदेश नम्बर ५ र ७ का जिल्लामा भारी बर्सात शुरु हुने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ ।
आइतवार साँझ प्रदेश नम्बर ५ को बाँके, बर्दिया, दाङ र सल्यानमा भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश १ र ३ का पहाडी जिल्लामा आइतवार बिहानैदेखि बर्सात शुरु भएको छ । आइतवार अपराह्नदेखि प्रदेश २ का बारा, पर्सा र रौतहट तथा प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा पनि भारी वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।
तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानको जोखिम
आइतवार बिहानैदेखि शुरु भएको वर्षाका कारण तराईका जिल्लामा बाढीसँगै डुबानको जोखिम बढेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार आइतवार बिहानदेखि शुरु भएको वर्षाले देशका १० वटा नदीमा पानीको बहाव बढेको छ ।
शाखाले कन्काई, कोशी, कमला, बाग्मती नारायणी, पश्चिम राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्न शुरु भइसकेको जनाएको छ ।
कमला नदीको जलाधार क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेकाले सिरहा र धनुषा जिल्लाका केही क्षेत्रमा बाढीको जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ ।
यस्तै महाभारत र चुरे पर्वत श्रृंखला भएर बग्ने विरिङ, कन्काई, कमला, खाँडो, गागन, रातु, बागमती, पूर्वी राप्ती, रिउखोला, वाणगंगा, पश्चिम राप्ती, बबई लगायत नदीमा पानीको बहाब बढेर शतर्कता तहसम्म पुग्ने बाढी पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ ।
कस्तो छ विपद् व्यवस्थापनको तयारी ?
देशका पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा बाढी तथा डुबानको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले पनि सम्भावित विपद्को व्यवस्थापनका लागि तयारी तीव्र पारिएको जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालय मातहतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव केदार न्यौपानेले सम्भावित विपद् व्यवस्थापन र विपद्पछिको उद्दार र राहतका लागि सम्पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।
‘सकेसम्म विपद्पूर्व नै संभावित विपदका घटनाबारे नागरिकलाई सूचित गराएर क्षति कम गर्ने तयारीमा छौं,’ सह–सचिव न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘विपद्लाई रोक्न सकिन्न । घटना भइसकेको अवस्थामा तत्काल उद्दारमा खटिन र उद्दार पछि राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा बसेका छौं ।’
न्यौपानेका अनुसार वर्षाको समयमा हुने विपदका दृष्टिकोणाले बढी जोखिमपूर्ण मानिएका ठाउँमा परिचालन हुन सुरक्षाकर्मीसहित उद्दारकर्मीको टोली तयार भइसकेको छ । विपद्पछिको उद्दारका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा उद्दार टोली परिचालन हुनेछ ।
राहत बाँड्न ३ अर्ब रुपैयाँ तयार !
सरकारले तराईका जिल्लामा बाढी तथा डुबान र पहाडी जिल्लामा पहिरोबाट हुने सम्भावित क्षतिपछि प्रभावितहरूलाई अल्पकालीन राहत वितरणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सह–सचिव न्यौपानेका अनुसार सम्भावित विपद्बाट प्रभावित हुने नागरिकलाई तत्काल राहत वितरण गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिको कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ ।
उक्त कोषबाट तत्काल आवश्यक राहतका लागि खर्च गर्न सकिने न्यौपानले बताए ।
सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावितहरुलाई अल्पकालीन रूपमा वितरणका लागि ७ वटै प्रदेशमा राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको न्यौपानेको भनाइ छ ।
एम्बुलेन्सदेखि हेलिकप्टरसम्म तयारी अवस्थामा
सरकारले ७ वटै प्रदेशमा सम्भावित बाढी–पहिरो र डुबानबाट प्रभावितहरूलाई तत्काल उद्दार गर्न हेलिकप्टरदेखि एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ ।
आपतकालीन उद्दारका लागि नेपाली सेनाका ३ वटा हेलिकप्टरलाई जतिसुकै बेला पनि ‘मुभ’ हुने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको गृह मन्त्रालयका सह–सचिव केदार न्यौपानेले बताए । थप हेलिकप्टर आवश्यक परे सेनासहित निजी कम्पनीका हेलिकप्टर पनि परिचालन गर्न सकिने न्यौपानेको भनाइ छ ।
यस्तै तराईका जिल्लामा बाढी तथा डुबानबाट हुने मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा एम्बुलेन्ससहित उद्दारका लागि आवश्यक पर्ने गाडीसहितका साधन तयारी अवस्थामा राखिएको न्यौपानले बताए ।